Taratasy avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana | Tena Finoana
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Féroïen Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kabiyè Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe (Afovoany) Mongol Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Nias Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Misy lahatsoratra mahaliana hoe “Tahafo ny Finoan’izy Ireo”, ao amin’ny Tilikambo Fiambenana. Nanomboka ny 1 Janoary 2008 izy io no navoaka, ary natao isaky ny telo volana. Mahafinaritra erỳ ny mamaky azy!
Ahoana ny hevitry ny olona momba azy io? Hoy ny anabavy iray: ‘Nihomehy aho namaky ny tantaran’i Marta satria tena hoatr’azy mihitsy aho. Tiako ho voakarakara tsara ny vahiniko, dia ilaozako mikenonkenona etsy sy eroa. Lasa hadinoko indraindray hoe mba mila mipetraka kely sy miresadresaka amin-dry zareo aho.’ Hoy kosa ny tanora iray rehefa avy namaky ny tantaran’i Estera: ‘Nandraisako lesona mihitsy ilay izy! Indraindray tsinona isika variana be amin’ny akanjo sy lamaody farany. Tokony mba hoe metimety aloha ny paozintsika e! Fa tsy tokony ho tafahoatra be fotsiny. Ny toetrantsika tsinona no tena jeren’i Jehovah.’ Ny anabavy iray indray faly be rehefa avy namaky ny tantaran’i Petera, ka niteny hoe: “Tiako be ny namaky an’ilay izy, ka teo aho, dia teo. Hoatran’ny hoe niaraka tamin’i Petera teny mihitsy aho. Azoko an-tsaina daholo izay nitranga, na dia izay tsy tena voalaza tao aza.”
Mbola maro be no nandefa taratasy fisaorana tatỳ aminay, ankoatra an’ireo. Tena hita àry hoe “nosoratana ho fianarantsika” ny tantaran’ny mpanompon’i Jehovah fahiny. (Rom. 15:4) Nasain’i Jehovah natao ao amin’ny Baiboly izy ireny, satria tena mahasoa antsika. Afaka mandray lesona avy amin’izy ireny isika rehetra, na vao haingana na efa ela no nanompo an’i Jehovah.
Mampirisika anareo izahay hamaky an’ity boky ity avy hatrany. Ampiasao amin’ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana izy ity, satria tena ho tian’ny ankizy. Hodinihina amin’ny Fianarana Baiboly Ataon’ny Fiangonana koa izy ity, ka ataovy foana izay hanatrehana fivoriana. Aza maimaika rehefa mamaky azy, fa alao sary an-tsaina ilay tantara. Ataovy toy ny hoe ianao mihitsy ilay olona, ka eritrereto izay tsapany sy izay hitany. Saintsaino koa hoe inona no ho nataonao raha ianao no teo amin’ny toerany.
Tena faly àry izahay manome anao an’ity boky ity. Enga anie ka hahasoa anao sy ny fianakavianao izy ity. Mirary soa be dia be ho anareo izahay.
Tahafo ny Finoan’izy Ireo—Taratasy avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana